Air dessert obucayi emangalisayo okumnandi. It lingachazwa ngokuthi ikhekhe "izingilazi eziphukile", okuyinto uzokwazi ukudala hhayi kuphela umpheki imfundamakhwela, kodwa futhi nengane.
Ikhekhe "ingilazi Broken" - egqamile futhi obonisa play esiyingqayizivele dessert akuthandayo. Isikhathi esining impela libizwa ngokuthi "KaMose" noma "aquarium". Futhi lezi amagama awuchaza ngokunembile ubuhle kanye ukugxumagxuma of imibala lapho lihlukile. Lokhu ikhekhe ihlanganisa esasile ithenda izithelo ukunambitheka jelly ukuncibilika Airy isipanji ikhekhe. Futhi ukupheka kakhulu ukumane, into esemqoka - nje ulandela imiyalelo.
Ngakho, ukondla izivakashi nezihlobo jelly ikhekhe "izingilazi eziphukile", udinga izingxenye ezilandelayo. Ukuze isipanji ikhekhe kufanele Thenga kakhulu amaqanda ku inani izingcezu ezine, 150 amagremu kafulawa 175 amagremu ushukela. Ukuze jelly "ikhekhe" jelly zidinga zinhlobo ezintathu, amapetshisi okusemathinini e isamba 200 amagremu, ushukela i inani amagremu 100 ukhilimu ekuqhumeni isigamu (noma 0.75 amalitha) wokuqukethwe fat esingeqile 20%, iphakheji ye gelatin, kanye vanilla ushukela.
inqubo ukupheka ayikanye eziyinkimbinkimbi kanjalo. Ngakho, ngosuku olwandulela iholide lomphakathi kufanele ukulungiselela jelly and bhisikidi. Eyokuqala ibhalwe iziyalezo ezinikeziwe ngumkhiqizi.
Ukubhaka ikhekhe, ungasebenzisa iresiphi zakudala. Ukuze wenze lokhu, ushukela ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili alinganayo. Kusukela omunye wabo ngesiswebhu amaqanda izikhupha, kanye nezinye - namaprotheni a Foam okuqinile. Ngaphezu kwalokho, e omningi futhi amaqanda izikhupha engeza kwesigamu umthamo ufulawa, pre-bahlolwe, futhi ½ we Foam amaprotheni. Mix ngobumnene kulandela spoon phansi phezulu. Lapho mass iba iyunifomu futhi, engeza ufulawa Foam ezisele, ukuxuba indlela efanayo. Ngemva kwalokho inhlama is batheleka iyiphi ukuma nentaba nokuthumela nezitini imizuzu 40-50 kuhhavini igesi 170 degrees (kagesi - degrees 200, multivarka - "Baking" Imodi imizuzu okungenani 40). Lapho nje propeksya ikhekhe, linqotshiwe futhi washiya ngaphansi ithawula iphepha amahora 8-12.
Jelly iholide asuswe isikhunta futhi uthathe cubes. Peaches ucabange ukuthi ubhekene colander bese uvumele sokukhipha uketshezi ngokweqile. Gelatin ibhalwe ngokwezinto bhukwana, bese ungeze ku ukhilimu omuncu, pre-exutshwe ushukela. Bhisikidi futhi uthathe cubes.
Zonke izithako zilungele futhi manje ungakwazi "ukuqoqa" ikhekhe "izingilazi eziphukile". Ukuze wenze lokhu ngesimo pre-okuphekwe (isib abicah noma nje endishini enkulu) babeka izingcezu jelly and peach imigqa ke uzinameke omuncu sauce amnandi. Ekupheleni lokhu mass ngezikhathi ukubeka bhisikidi cubes, ukuthumela amahora amabili lukhuni efrijini. Ukuze ukukhonza dessert zanikeza i-ezifanele ubukhulu dish kanye ukuhlobisa ikhekhe siphelile "izingilazi eziphukile".
Izithombe le dessert, ngasendleleni, ukuhlobisa kahle albhamu yezithombe nomndeni wakho.
Ukuhluka ku ingqikithi
Ukuthandwa le dessert elula esihlwabusayo libanzi ukuze akumangalisi ukuthi iresiphi zalo eziyisisekelo washintsha ngokuhambisana okuthandwa ukupheka.
Ngakho, ngokuvamile kakhulu cubes isipanji esikhundleni amakhukhi "Baked ubisi" noma wenqabe. Ngaphezu kwalokho, peach izithelo jam esikhundleni ngeminye (isb sitrobheli), izithelo omuncu-sweet noma ufake enye uhlobo jelly.
Futhi zonke ngoba, uma zama ikhekhe "Broken Glass" ufuna sijabulele lesi uthuli emangalisayo flavour futhi.
Khetha ikhekhe recipe ne kefir - elula okumnandi
Izithelo Yummy. Dessert banana
Namabhanisi Delicious Puff khekhe
Ikhekhe in the pan ne apula: zokupheka kanye nezici ukupheka
Izifo kanye Izimbangela
Kanjani ukufundisa inja yakho umyalo "FAS"? Manje siyathola!